भोज खुवाएपछि नाता फेरेर भारतीयलाई नागरिकता ! – Jagaran Nepal
भोज खुवाएपछि नाता फेरेर भारतीयलाई नागरिकता !
बर्दिबास। २०६३ सालमा गाउँ—गाउँमा नागरिकता बाँड्ने टोली परिचालन पुग्यो। नागरिकता लिन मानिसको ताँती नै लाग्यो। कोही देशबाट घर फर्किए भने कोही विदेशबाट। भीडमा पसेर नेपालीले मात्रै होइन्, भारतीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए। यस्तै भीडमा पस्नेमध्ये थिए, एक सीतामढी मनपौरका एक भारतीय नागरिक। जसले स्थानीय राजनीतिक दललाई मासुरक्सीको भोज खुवाएर नेपाली नागरिकता हात पारेका थिए। महोत्तरीको तत्कालीन गाविस बिजलपुरा—४ बस्ने अकुवान टोलका ती भारतीय नागरिकको ज्वाँई थिए।
ती ज्वाँइलाई नागरिकता दिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साँक्षी बसे भने, नेपालमा रहका भारतीयका नातागोताले सनाखत गरे। भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउन आफ्नै छोरा, नाती, काका बनाएर सिफारिस गरेका थुपै्र उदाहरण छन्। नेपाली चेलीसँग विवाह गरेका ती भारती युवक २०५८ साल तिरबाट ससुराली गाउँमा बस्न थाले। नेपाली चेलीले पहिलो सन्तान छोरी आफ्नै भारतस्थित आफ्नै ससुरालीमा जन्माएकी थिइन्। लामो समयसम्म अर्को सन्तान नजन्मिएपछि श्रीमति लिएर ती भारतीय छोरो पाउने सपना बोकेर बिजलपुरास्थित ससुराली आएका थिए।
बिजलपुरा—२ चल्कीस्थित रामजानकी गुठ्ठीको जग्गामा घर बनाएर बस्न थाले। ती भारतीय युवकले परिवार चलाउन कहिले खाजा पसल चलाए भने कहिले मजदुरी गरे। २०६३ सालमा नागरिकता टोली पुग्दासम्म उनी गाउँभरि नै चिरपरिचित भइसकेका थिए। उनले नेपाली नागरिक बन्न फर्म भरे। ‘भोज खुवाउनु पर्छ, अनि नागरिकता बन्छ’ भन्दै राजनीतिक दलका एक नेताले भारतीयलाई भने। भारतीयले भोज खुवाउने शर्त पूरा गरेपछि कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिसँग ती नेताले सेटिङ्ग मिलाए। अनि फर्ममा स्थानीय तत्कालीन सात दलका प्रतिनिधिले ‘भारतीय युवक नेपालमै जन्मिको’ सहरजमिन कागजमा गरिदिए।
नागरिकता टोलीले निसंकोच भारतीयलाई नागकिता दिए। केही वर्षपछि ती दम्पत्तिको दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरो जन्मियो। त्यसपछि भारतीय युवकले गुठ्ठीमा बनाएको घर बेचे। साइकलमा सरसमान लोड छोराछोरी र श्रीमतिको साथमा नेपाली नागरिकता लिएर आफ्नै जन्मभूमि भारततिर फर्किए। महोत्तरीको रामगोपालपुर—५ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी भारतीय नागरिक रहेको भन्दै उजुरी परेको छ। उनको विरुद्धमा ६ फाल्गुण २०७६ मा उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका मुद्दा फाँटका खरिदार सुधीर साहले जनाए। उनका अनुसार उजुरी परे लगतै फाल्गुण ८ गते उनको नाममा पत्र काटिएको थियो।
वडा अध्यक्ष चौधरी भारतीय नागरिक रहेको प्रमाणसहित रामगोपालपुर—८ थलहीका हरिश्चन्द्र ठाकुरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। नागरिकतासम्बन्धी उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्दैछ। लकडाउनले अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। ‘अवैध रुपमा नागरिकता लिएको ठहर भयो भने नागरिकता खारिज, कैद, जरिवानासहितको कारबाही हुन्छ,’महोत्तरीका सीडियो कृष्णबहादुर कटुवालले भने। भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउन आफ्नै छोरा, नाति, काका बनाएर सिफारिस गरेका थुपै्र उदाहरण छन्।२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वातन्त्रण उमेदवारी दिएका जितेन्द्र वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
उनी भारतको सितामढी जिल्लाको सिरसिया बजारको बासिन्दा रहेको प्रमाण फेला परेको छ। उजुरीकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको उजुरीमा भारतीय निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा चौधरीको फोटोसहितको नाम रहेको तथ्य पनि पेश गरेको छ। भारतीय मनतदाता नामावलीमा वडा अध्यक्षको नाम जितेन्द्र चौधरी र उनको बुबाको नाम हीरा चौधरी उल्लेख छ भने नेपाली नागरिकतामा वडा अध्यक्षको बुबाको नाम हीराबाट परिवर्तन गरेर अनिल चौधरी उल्लेख छ। उनको बुबा र वडा अध्यक्षले सन् २०१९ मा भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा मतदानसमेत गरेका उजुरीकर्ताको भनाइ छ।